ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 50°50′N 4°00′E﻿ / ﻿50.833°N 4.000°E﻿ / 50.833; 4.000
Koninkrijk België (ဒတ်ချ်)
Royaume de Belgique (ပြင်သစ်)
Königreich Belgien (ဂျာမန်)
ဆောင်ပုဒ်: "Eendracht maakt macht" (ဒတ်ချ်)
"L'union fait la force" (ပြင်သစ်)
"Einigkeit macht stark" (ဂျာမန်)
(အင်္ဂလိပ်: "The Brabantian")
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်)
– ဥရောပတိုက်အတွင်း (အစိမ်းရောင် နှင့် မီးခိုးရင့်)
အလက်ဇန္ဒား ဒီ ခရူး
၁၈၃၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်
၁၈၃၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၉ ရက်
၃၀,၆၈၉ km2 (၁၁,၈၄၉ sq mi) (အဆင့်: ၁၃၆)
၀.၇၁ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အရ)
၁၁,၄၉၂,၆၄၁ (အဆင့် - ၈၂)
၃၇၆/km2 (၉၇၃.၈/sq mi) (အဆင့် - ၂၂)
$၅၇၅,၈၀၈,၀၀၀,၀၀၀ (အဆင့် - ၃၆)
$၅၀,၁၁၄ (အဆင့် - ၁၈)
$၅၀၃,၄၁၆,၀၀၀,၀၀၀ (အဆင့် - ၂၆)
$၄၃,၈၁၄ (အဆင့် - ၁၆)
အလွန်မြင့် · ၁၇
အခြားသော ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် မျှဝေသုံးစွဲရန်အတွက် .eu ဒိုမိန်းကိုလည်း အသုံးပြုသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံ ဘုရင့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနောက်ဥရောပရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် တိုင်းပြည်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ ကို စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြသောတိုင်းပြည်များထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ နေတိုး နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများစွာတို့အတွက် ဌာနချုပ်ရုံးများ တည်ရှိရာ တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်သည်။  ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း ၃၀၅၂၈ ကျယ်ဝန်းပြီး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀.၈သန်းခန့်ရှိသည်။ ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လက်တင်ဥရောပ ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ရပ်ကြားရှိနိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံသားတို့တွင် ဘာသာစကားမျိုးစုံ ပြောဆိုကြသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဒတ်ခ်ျစကားပြော ဖလင်းမစ်ရှ်လူမျိုး နှင့် ပြင်သစ်စကားပြော ဝါလွန်း လူမျိုး တို့ဖြစ်ပြီး ဂျာမန်စကားပြောများလည်း အနည်းငယ်ရှိသေးသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံ၏ အကြီးဆုံးဒေသကြီးများမှာ ဒတ်ခ်ျစကားပြော ဖလင်းမစ်ရှ်လူမျိုးများနေထိုင်ရာ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ဖလန်းဒါးစ်နယ် နှင့် ပြင်သစ်စကားပြော ဝါလွန်းလူမျိုးများနေထိုင်ရာ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ဝါလိုနီးယားနယ် တို့ဖြစ်ကြသည်။ မြို့တော်ဖြစ်သော ဘရပ်ဆဲလ်တွင် ပြင်သစ်စကားပြော ဖလင်းမစ်ရှ်လူမျိုးက အများစုဖြစ်သည်။ ဂျာမန်စကားပြော လူနည်းစုကမူ ဝါလိုနီးယားနယ်၏ အရှေ့ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသည်။   ဘယ်လ်ဂျီယမ်၏ ဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပဋိပက္ခများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အုပ်ချုပ်ပုံများမှာ အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးသည်။ 
ဘယ်လ်ဂျီယမ်ဟူသော ဝေါဟာရမှာ ဂယ်လီယာ ဘယ်လ်ဂျီကာ (Gallia Belgica) ဟူသော စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ ရောမအင်ပါယာခေတ်က မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးကျသော ဘယ်လ်ဂျေးလူမျိုးများ နေထိုင်ရာ ဂေါလ်နယ် ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းသို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘယ်လ်ဂျေးလူမျိုးဟူသည်မှာ ဆဲ့လ်ထ် လူမျိုးနှင့် ဂျာမန်အနွယ် လူမျိုးများ သွေးနှောရာမှ ပေါက်ပွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။  သမိုင်းကြောင်းအရ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ(၃)နိုင်ငံကို Low Countries ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ အလယ်ခေတ်အကုန်မှ ၁၇ရာစုနှစ်အတောအတွင်း ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးစည်ကားရာ ဒေသဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၆ရာစုနှစ်မှ ၁၈၃၀ ဘယ်လ်ဂျီယမ်တော်လှန်ရေး ကာလအထိ ယင်းဒေသတွင် ဥရာပမှ အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့၏ စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာ စစ်တလင်းပြင် ဖြစ်ခဲ့သည်။  ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဘယ်လ်ဂျီယမ်သည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ဂုဏ်ပိုတက်လာခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တွင် စက်မှုတော်လှန်ရေးကို တက်ကြွစွာဆင်နွှဲခဲ့သည်။  ၂၀ရာစုခေတ်တွင် အာဖရိကတွင် ဘယ်လ်ဂျီယမ်ကိုလိုနီနယ်များ အများအပြားပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။  ၂၀ရာစုနောက်ပိုင်းတွင် ယဉ်ကျေးမှု မတူခြင်းနှင့် ဖလန်းဒါးစ်နယ်၏ စီးပွားရေး မညီမျှခြင်းတို့ကြောင့် Flemings(ဖလင်းမစ်ရှ်) နှင့် Francophones(ပြင်သစ်စကား​​ပြော) တို့ကြား လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်။ ယင်းပဋိပက္ခများမှာ ယခုချိန်ထိ ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ယခင်က စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့သော ဘယ်လ်ဂျီယမ်ကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဖြစ် တည်ဆောက်ရန် အခက်အခဲများရှိနေစေသည်။
↑ Government type: Belgium။ The World Factbook။ CIA။7February 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ be.STAT။ Bestat.statbel.fgov.be (26 November 2019)။
↑ Surface water and surface water change။ Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)။
↑ Structuur van de bevolking (in nl)။ Statbel။
↑ 2019 Human Development Index Ranking။ Hdr.undp.org။9December 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Belgian Constitution (PDF)။ Brussels, Belgium: Belgian House of Representatives။ May 2014။ p. 63။ 10 August 2015 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ 10 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Leclerc, Jacques, , membre associé du TLFQ (18 January 2007)။ Belgique • België • Belgien—Région de Bruxelles-Capitale • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in French)။ L'aménagement linguistique dans le monde။ Host: Trésor de la langue française au Québec (TLFQ), Université Laval, Quebec။9June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “C'est une région officiellement bilingue formant au centre du pays une enclave dans la province du Brabant flamand (Vlaams Brabant)”
*About Belgium။ Belgian Federal Public Service (ministry) / Embassy of Belgium in the Republic of Korea။2October 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “the Brussels-Capital Region is an enclave of 162 km2 within the Flemish region.”
*Flanders (administrative region)။ Microsoft Encarta Online Encyclopedia။ Microsoft (2007)။ 31 October 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The capital of Belgium, Brussels, is an enclave within Flanders.”
*McMillan, Eric (October 1999)။ The FIT Invasions of Mons (PDF)။ Capital translator, Newsletter of the NCATA, Vol. 21, No. 7, p. 1။ National Capital Area Chapter of the American Translators Association (NCATA)။ 23 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The country is divided into three increasingly autonomous regions: Dutch-speaking Flanders in the north; mostly French-speaking Brussels in the center as an enclave within Flanders and French-speaking Wallonia in the south, including the German-speaking Cantons de l'Est).”
*Van de Walle, Steven, lecturer at University of Birmingham Institute of Local Government Studies, School of Public Policy။ Language Facilities in the Brussels Periphery (PDF)။ Katholieke Universiteit Leuven—Leuvens Universitair Dienstencentrum voor Informatica en Telematica။ 31 October 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Brussels isakind of enclave within Flanders—it has no direct link with Wallonia.”
↑ The German-speaking Community။ The German-speaking Community။ 30 May 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ The (original) version in German language (already) mentions 73,000 instead of 71,500 inhabitants.
↑ Morris, Chris။ "Language dispute divides Belgium"၊ BBC News၊ 13 May 2005။ 8 May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Petermann, Simon, Professor at the University of Liège, Wallonia, Belgium—at colloquium IXe Sommet de la francophonie—Initiatives 2001—Ethique et nouvelles technologies, session6Cultures et langues, la place des minorités, Bayreuth (25 September 2001)။ Langues majoritaires, langues minoritaires, dialectes et NTIC (in French)။2November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bunson, Matthew (1994)။ Encyclopedia of the Roman Empire (Hardcover 352pp ed.)။ Facts on File, New York။ p. 169။ ISBN 081602135X Paperback 512pp, ISBN 0-8160-3182-7; Revised edition (2002), Hardcover 636pp, ISBN 0-8160-4562-3 |isbn= တန်ဖိုး invalid character စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)။
↑ Footnote: The Celtic and/or Germanic influences on and origin(s) of the Belgae remains disputed. Further reading e.g.Witt, Constanze Maria (May 1997)။ Ethnic and Cultural Identity။ Barbarians on the Greek Periphery?—Origins of Celtic Art။ Institute for Advanced Technology in the Humanities, University of Virginia။6June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Haß, Torsten, Head of the Fachhochschule (University of Applied Sciences) of Kehl Library, Kehl, Germany (17 February 2003)။ Rezention zu (Review of) Cook, Bernard: Belgium. A History ISBN 0-8204-5824-4 (in German)။ FH-Zeitung (journal of the Fachhochschule)။9June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “die Bezeichnung Belgiens als „the cockpit of Europe” (James Howell, 1640), die damals noch auf eine kriegerische Hahnenkampf-Arena hindeutete”—The book reviewer, Haß, attributes the expression in English to James Howell in 1640. Howell's original phrase "the cockpit of Christendom" became modified afterwards, as shown by:
Carmont, John။ The Hydra No.1 New Series (November 1917)—Arras And Captain Satan။ War Poets Collection။ Napier University's Business School။ 11 May 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။—and as such coined for Belgium:
Wood, James (1907)။ Nuttall Encyclopaedia of General Knowledge—Cockpit of Europe။ 24 May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Cockpit of Europe, Belgium, as the scene of so many battles between the Powers of Europe.” (See also The Nuttall Encyclopaedia)
↑ Fitzmaurice, John, at the Secretariat-General of the European Commission, taught at the Université Libre de Bruxelles (1996)။ New Order? International models of peace and reconciliation—Diversity and civil society။ Democratic Dialogue Northern Ireland's first think tank, Belfast, Northern Ireland, UK။ 12 August 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Belgium country profile။ EUbusiness, Richmond, UK (27 August 2006)။ 12 August 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Karl, Farah (text); Stoneking, James (course) (1999)။ Chapter 27. The Age of Imperialism (Section 2. The Partition of Africa) (PDF)။ World History II။ Appomattox Regional Governor's School (History Department), Petersburg, Virginia, USA။ 25 September 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 August 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ&oldid=729784" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။